Khasaaro ka dhashay qarax ka dhacay Shabeellaha Hoose. | Keydmedia
Khasaaro ka dhashay qarax ka dhacay Shabeellaha Hoose.
Ugu yaraan hal ruux ayaa ku geeriyooday qaraxa oo ahaa nooca Miinada dhulka lagu aaso, kaasoo ka dhacay degmada Awdheegle ee gobolka Shabeelaha Hoose.
MUQDISHO, Soomaaliya - Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax khasaaro geystay oo shalay gabal dhicii ka dhacay degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose .
Sida dadka deegaanka ku waramayaan qaraxa ayaa ahaa nooca Miinada dhulka lagu aaso, kaasoo ka dhacay galbeedka magaalada, gaar ahaan meel u dhow xerada ciidamada Kumaandooska Soomaaliya ee Danabad ay ku leeyihiin halkaas.
Ugu yaraan hal ruux ayaa ku geeriyooday qaraxa, kaas oo magaciisa lagu sheegay Idris, halka ay saddex kalena ku dhaawacmeen, sida uu sheegay guddoomiyaha degmada Awdheegle Cabdullaahi Cismaan Abuukar oo la hadlay warbaahinta gudaha.
Guddoomiyaha ayaa intaas ku daray in qaraxa uu ahaa Miino waddada dhinaceeda lagu aasay, taasoo loola Dan lahaa in lagu dhibaateeyo dadka shacabka ah ee ku nool degmada, waxaa uuna sheegay in ay wadaan baaritaan lagu baadi goobayo ciddii ka dambeysay falkaan.
Ilaa iyo hadda majirto cid sheegatay majirto masuuliyadda qaraxa, balse waxaa inta badan qaraxyada noocaan oo kale ah dusha u rito Ururka Al-Shabaab oo dagaal kula jiro ciidamada AMISOM iyo dowladda Soomaaliya.
Degmada Awdheegle ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa ka mid ah degmooyinka fara ku tiriska ay dhawaan la wareegeen ciidamada dowladda Soomaaliya, waxaana in muddo ah maamulayay dhaq dhaqaaqa Al-Shabaab.